WARBIXIN: Shaxda Uu Tababaraha Paris Saint-Germain Ee Unai Emery Kala Hor Iman Doono Real Madrid Oo Uu Sharaxaad Ka Bixiyay Wargayska Marca Ee Madrid Ka Soo Baxaa. - Laacib.net
WARBIXIN: Shaxda Uu Tababaraha Paris Saint-Germain Ee Unai Emery Kala Hor Iman Doono Real Madrid Oo Uu Sharaxaad Ka Bixiyay Wargayska Marca Ee Madrid Ka Soo Baxaa.
by Mohamoud Batalaale | Friday, Feb 9, 2018
Waxaa aad u soo dhawaanaya waqtiga sida wayn aduunka looga sugayo ee ay Real Madrid iyo Paris Saint-Germain iskaga hor iman doonaan Santiago Bernabeu waxaana ka hor kulankan shaxda uu Unai Emery kala soo muuqan doono Bernabeu tooska ku sii ifiyay wargayska Marca ee Madrid ka soo baxa isaga oo sharaxaad buuxda ka bixiyay boosaska haddaba la sii ogyahay in Unai Emery aanu waxba ka badalayn iyo kuwa ay tahay in uu go’aan ka gaadhi doono.
Ugu horayn wargayska Marca ayaa soo qaatay ciyaartoyda booskooda aanu wax shaki ahi ku jirin ee ay tahay in Zidine sii darsi karo ka hor kulankan waxaana lagu sheegay warbixintan in goolhaye Areola uu goolka shaki la’aan ku soo bilaaban doono isla markaana ay difaaca ku jiri doonaan Dani Alves, Thiago Silva iyo Marquinhos.
Balse waxaan kala cadayn cida buuxin doonta difaaca bidix iyada oo Yuri iyo Kurzawa uu Emry kala dooran doono taas oo dhamaystiraysa afarta difaac iyo goolhaye shaxda uu Emery kala soo muuqan doono Bernabeu. Waxayna u badan tahay in afarta difaaca ah ay ku wada jiri doonaan Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos iyo Kurzawa.
Laakiin dhaawaca soo gaadhay Motta ayaa albaabka u furaya xidiga ka ciyaari doona dhexda danbe ama burburiyaha iyada oo Giovani Lo Celso uu bandhig fiican samaynayo laakiin iyada Rabiot ay iska garab ciyaari karaan. Laakiin Emry ayaa sidoo kale hadda haysta Lass oo ay si xor ah dhawaan kula soo wareegeen.
Waxa aanu shaki ku jirin ayaa ah in Unai Emery uu shaxdiisa ku soo wada bilaabi doono MCN oo 69 gool dhexdooda soo dhaliyay kuwaas oo ay tahay in Keylor Navas uu habeen mashquul badan ku wajihi doono halka Marco Verratti uu booskiisu yahay mid la sii xaqiijin karo.
Laakiin arinta sida wayn laysku waydiinayo ayaa ah haddii uu Unai Emery shaxdiisa ku soo bilaabi doono Angel Di Maria kaas oo 9 gool soo dhaliyay 10 kii kulan ee ugu danbeeyay ee sanadkan 2018 isla markaana saddexley goolal ah ka dhaliyay kulankii Sochaux inkasta oo ay adag tahay in Emery uu kala jabiyo Mbappe, Cavani iyo Neymar haddii ayna soo bixin duruuf khaas ahi.
Laakiin Emry ayaa haysta fursada uu Di Maria kaga soo ciyaar siin karo khadka dhexe isaga oo kula soo bilaaban kara Marco Verratti iyo Rabiot taas oo PSG siin karta hal abuur aad u badan oo ay saddexda weerarku ku heli karaan fursado badan inkasta oo ay difaacasho ahaan hoos u dhigi karto.
Angel Di Maria ayaa khadka dhexe si fiican uga ciyaaray waqtigii Carlo Ancelotti ee Real Madrid gaar ahaan finalkii Lisbon ee ay Real Madrid koobka Champions League ka qaatay Atletico Madrid. PSG ayaa xili ciyaareedkan si wayn ugu tiirsan Neymar Jr, Cavani iyo Mbappe oo wadar ahaan 69 gool soo dhaliyay waana shaqada ugu adag ee ay Zidane waajib ku tahay in uu sii darso ka hor kulankan. Laakiin BBC oo waqti ahaa xidigo si wayn looga cabsado ayaan wali ku jirin xaaladii ugu fiicnayd.
Kulanka Real Madrid iyo PSG ayaa noqday kulanka ugu hadal haynta badan ee UEFA Champions League iyada oo usbuuca soo socda markale garoomada Yurub dib looga daari doono heesta caanka ah ee Champions league oo ayna dhegaha mucaashiqiinta kubbada cagtu maqal muddo laba bilood ah.
mstafe 09-02-2018 at 3:23 pm -
BBC waa weerar laga hoogey aabo
mstafe 09-02-2018 at 3:20 pm -
Real was koox hadey kacdo aan lacelin Karin
Mohammed Asad 09-02-2018 at 11:09 am -
Haadaanu nahay tageeryasha real Madrid Kama baqanayno rag loo Soo gaabiyey MCN difaaca celiya waan leenahay balse waxa ugu muhiimsan ragii lagu kala xidhi laaha real Madrid guuuuuul ⚽⚽⚽⚽
Masago 09-02-2018 at 9:44 am -
3 da dhexe dimaria,verrati iyo motta ama rabiot AA ugu dhow